Best Automatic gburugburu karama igwe emeputa na Factory | UBL
Ịkwụ Ụgwọ & Mbupu Usoro:
Oge nzipu: 20-25 ụbọchị ọrụ
Usoro ịkwụ ụgwọ: Western Union, T/T, MoneyGram
Tụkwasịnụ Ikike: 25 Set kwa ọnwa
Ọnụ ọgụgụ aha Otu akara n'otu oge
Ọsọ 30 ~ 200pcs/min
Nha akara Ogologo 20 ~ 300mm; Obosara15 ~ 165mm
Ogo ngwaahịa (Vetikal) Dayameta 30 ~ 100mm; ịdị elu: 15 ~ 300mm
Chọrọ labeelu Mpempe akwụkwọ mpịakọta; dia dia 76mm; mpịakọta mpụga ≦ 300mm
Ogo igwe na ibu ya L1930mm*W1120mm*H1340mm; 200Kg
Ike AC 220V; 50/60HZ
Nwere ike ịgbakwunye igwe itinye rịbọn
Nwere ike tinye ihe mmetụta ntụgharị
Nwere ike itinye ngwa nbipute inkjet ma ọ bụ ngwa nbipute laser
Enwere ike itinye karama unscrambler
Nhazi Njikwa PLC; Nwere ihe mmetụta; Nwere ihuenyo mmetụ;
Nwee eriri eriri
Ọ dabara na ụdị karama rpunnd oge niile ma ọ bụ obere karama gbara gburugburu, mado otu aha ma ọ bụ abụọ, nke enwere ike iji ya na -ejikọ ọnụ na akara okirikiri na ọkara
Ọdịdị kọntaktị akara dị elu A na -eji usoro mgbazigharị maka mkpọchi teepu akara iji zere ndapụ ọ bụla.
Ịdebanye aha site na ụzọ atọ (x/y/z) na ọchịchọ nke ogo asatọ nke nnwere onwe na -eme ka ọnụọgụ kọntaktị dị elu na -enweghị akụkụ ọ bụla nwụrụ anwụ na nhazi;
A na -eji eriri ịpị akara mmachi na -agbanwe agbanwe mara mma ma melite ogo nkwakọ ngwaahịa;
Njirimara nke ọrụ:
Nhọrọ ngwa nbipute rịbọn nwere ike bipụta ụbọchị mmepụta na nọmba ogbe, wee belata usoro nkwakọ ngwaahịa karama iji bulie arụmọrụ nke ọma.
Enwere ike ijikọ igwe na -atụgharị akpaka akpaka na njedebe nke ahịrị mmepụta, na -enye karama nri n'ime igwe akara akpaghị aka
Nhọrọ igwe mkpado ọkụ ma ọ bụ coder inkjet
Ọrụ nri akpaaka (dabere na ngwaahịa)
Nchịkọta akpaaka (dabere na ngwaahịa)
Ngwa akụrụngwa ọzọ
Ịdebanye aha okirikiri site na idobe ya
Ọrụ ndị ọzọ (dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị).
Nhazi nwere ike ọ bụrụ na enwere ọrụ ọ bụla achọrọ
TAG: onye na -akpọ akara akpaaka, akpaaka akpaaka akpaaka
Nke gara aga: Isi akara
Osote: Desktop akpaka karama igwe
Onye na -enyocha karama biya
Onye na -enyocha karama
Igwe nyocha akara
Onye na -enyocha karama mmanya
Nkọwa zuru ezu 1. Njikere dabara adaba maka karama okirikiri, nnyefe akpaka karama, dị ka ejikọrọ na igwe ịdebanye aha, igwe na -ejuputa igwe, eriri na -ebugharị igwe, nri karama akpaka, melite arụmọrụ; enwere ike itinye ya na nkwonkwo etiti nke ọgbakọ. ahịrị dị ka ebe nchekwa ihe iji belata ogologo eriri eriri. The nso nke ọdabara karama nwere ike adjuste ...
LABEL SIZE: 15-160mm APPLICABE DIMENSIONS: Nzọụkwụ: 25-55pcs/min, Servo: 30-65pcs/min IKE: 220V/50HZ Ụdị azụmaahịa: onye na-ebubata ya, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, rụpụta ihe: igwe anaghị agba nchara: injinia dị maka igwe nrụpụta dị mkpa. Ngwa UBL-T-401 Enwere ike itinye ya na akara nke ihe okirikiri dị ka ihe ntecha, nri, ọgwụ, mmetọ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Naanị -...
Okwu Mmalite Ngwa Ahịa igwe, nke a na -akpọkarị eriri eriri, bụ iji teepu eriri ngwaahịa ma ọ bụ katọn nkwakọ ngwaahịa, wee mechie ma tụgharịa nsọtụ abụọ nke ngwaahịa eriri nkwakọ ngwaahịa site na mmetụta ọkụ nke igwe. Ọrụ nke igwe ịkpa akwa bụ ime ka eriri plastik dị nso na ngwugwu agbakọtara, iji hụ na ngwugwu ahụ agbasaghị na njem na nchekwa ...
TYPE: Igwe akara, ihe na-egosi karama, igwe na-akwakọba ihe: igwe anaghị agba nchara LABEL SPEED: Nzọụkwụ: 30-120pcs/min Servo: 40-150 Pcs/min APPLICABLE: Bottle Square, Wine, Beverage, Can, Jar, Bottle Water Etc LABELING ACCURACY : 0.5 IKE: Nzọụkwụ: 1600w Servo: 2100w Ngwa UBL-T-500 dabara adaba n'otu akụkụ na akara abụọ nke karama ewepụghị, karama gbara gburugburu na karama square, dị ka ...
UBL-T-208 igwe akara igwe maka igwe anaghị agba nchara dị elu na alloy aluminom dị elu, isi akara site na iji moto servo dị elu iji hụ na izizi na ọsọ nke akara; a na-ejikwa sistemụ optoelectronic niile na Germany, japan na taiwan na-ebubata ngwaahịa dị elu, PLC nwere contral interface igwe mmadụ, ọrụ doro anya doro anya. Desktop akpaka gburugburu karama igwe Ụdị UBL-T-209 Label Quantity One label at ...
Ihe: igwe anaghị agba nchara akpaaka GRADE: ntuziaka na -arụ ọrụ ntuziaka: ± 0.5mm APPLICABLE: Wine, Beverage, Can, Jar, Medical Bottle Etc USAGE: Adhesive Semi Automatic Labeling Machine POWER: 220v/50HZ Basic Application Function Function: A na -eji ya n'ọtụtụ waya. , ogwe osisi, ọkpọ plastik, jelii, lollipop, ngaji, efere a ga -atụfu, na ihe ndị ọzọ. Gbanye akara ahụ. Ọ nwere ike ịbụ akara oghere ụgbọelu. ...
Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama biya, Onye na -enyocha karama, Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama mmanya, Igwe nyocha akara,